Okporo ụzọ bụ ndị ikwu, enwere m ihe | Martech Zone
Okporo ụzọ dị nso, enwere m ezuola
Bọchị Sọnde, Machị 1, 2009 Fraịdee, June 20, 2014 Douglas Karr
Trafficbawanye okporo ụzọ. Onye ọ bụla yiri ka ọ nọ na-eche na iwepụta ọdịnaya ya ebe ahụ gaa n'ọtụtụ ebe yana ọchụchọ ha nwere ike. Maka azụmahịa, ọ na-adị jụụ mgbe niile ịnweta nnabata mba ma ọ bụ mpaghara nke na-enwetụ mmasị na-aga n'ụlọ ọrụ gị. Ọ bụ okporo ụzọ ziri ezi, n'agbanyeghị?
Rụ ọrụ na ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ mere ka m nwee mmasị na ịchụ nta maka anya nku anya. Ọtụtụ akwụkwọ akụkọ na-aga n'ihu na-ebelata oke akwụkwọ akụkọ ha (ma na-eleda ha anya) naanị iji kwado ọnụego mgbasa ozi dị elu site na iji nnukwu elele. Nke a gabigara ókè - dịka ịgụta ọgụgụ ọgụgụ na akwụkwọ akụkọ ezuru ezu (ee, udlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Mmegharị Anya nyere ya ikike).
My Readership bụ Kwụsie ike
Ndị na-agụ akwụkwọ na saịtị m nwere nsogbu na mgbago, mana ọ na-adị otu ebe. N'izu, m na-agbatị ihe dị ka otu puku ndị na-agụ ozugbo, ihe dị ka puku RSS abụọ na 100 + ọzọ site na email. N'iburu eziokwu ahụ na edere m ọtụtụ ihe banyere Indianapolis na isiokwu dị mkpirikpi nke ịre ahịa n'ịntanetị - jikọtara m na m bụ otu onye, ​​ụlọ ọrụ oge-- enwere m obi ụtọ maka ọnụọgụ ndị ahụ.
Na mpaghara, blog enyewo m ọtụtụ ikpughe. Ekwenyere m na a na-akwanyere m ùgwù maka ịrụsi ọrụ ike m rụworo, ma na blọọgụ ma na-enyere ụlọ ọrụ aka. Enwetara m ọtụtụ akwụkwọ ịkpọ oku maka kọfị na nzukọ - ọtụtụ nke na anaghị m enweta ya na mgbe ụfọdụ ọ na-akpasu ndị na-achọ ijide m iwe. Enwekwara m ikele ikwu okwu nke zuru oke na m na-arụsi ọrụ ike na 'tuning' okwu m ma melite na nnyefe ha.
The nọmba nke nku anya na-ewere na blọọgụ m karịa akụ m ga-esi nyefee arịrịọ ọ bụla. Enweghị m ike iche n’agụmụ ọgụgụ m na-agba abụọ na otu nke ahụ nwere ike isi metụta ndụ m. M na-arụ ọrụ ọtụtụ awa, ọ na-adị m ka mụ na ndị ezinụlọ m anaghị anọkọ ogologo oge dị ka ọ masịrị m.
Ka ị na-ele ka ụlọ ọrụ gị ga-esi bulie olu ndị na-agụ ya na okporo ụzọ, ị kwesịrị ịjụ onwe gị, "Ego ole zuru ezu?". Gịnị ma ọ bụrụ na ị mejie ndị na - agụ akwụkwọ gị okpukpu abụọ? Ego ole ka ndị ndu ga - etinye na pipeline gị? Azụmaahịa gị ọ nwere ike ijikwa ya? Ọtụtụ ụlọ ọrụ adịghị njikere ịba ụba. Ndị ọzọ na-eme nke ọma ezu trafficgba ahia iji kwụọ ndị ọrụ ha na ndị nwe ha ụgwọ ụgwọ eziokwu.
Ọ bụghị mgbe niile banyere ikpuru anya, mgbe ụfọdụ ọ bụ naanị nku anya aka nri. Nduzi dị mkpa bụ ihe dị mkpa.
Tags: usoro azụmahịacazoomiobodo seoweird al yankovich
Vidio: Etu esi ebipụta Blog gị na Twitter
Ikwesiri Ibu na Nsonaazụ Nchọgharị Nchọpụta A
Geeks bụ Sexy
Echere m na ọ dabere na ụdị saịtị ị na-agba. Maka m, ọtụtụ okporo ụzọ na-enwetakwu ego. Ha nwere njikọ chiri anya.
Ọ bụrụ na ị nwere ebe 4 ma ọ bụ 5 ad na-agba ọsọ mgbasa ozi CPM, ọ nwere ike ịpụta ụma $ 300 ma ọ bụ $ 400 na akpa gị na njedebe nke ụbọchị .. mụbaa zụta 365 a .. ị ga-enweta ezigbo ego 🙂
Mar 2, 2009 na 11: 18 AM
Ezigbo eziokwu, Geeks! My blog bụ otu n'ime ndị 'ngwakọ' blọọgụ nke ahụ bụ mbipụta na akara aka maka ndụmọdụ na ikwu okwu. Ọ bụrụ n ’ọ bụ akwụkwọ, ọ ga - abụrịrị na m na - ebugharị envelopu ahụ na - achọ inweta ọtụtụ ndị m gụrụ.
Kedu ka ị si ekpebi mkpa? Anaghị m ajụ na nke ahụ ga-ada ada ma ọlị, btw.
Echere m… olee? Nwere ike ịhụ ebe ụfọdụ ndu si abịa… nke a bụ mbido. Nwere ike ịhụ mgbe ndị mmadụ na-ekwu okwu… isi data ọzọ. I nwere ike ikpe olu nke email ị nwetara “jikọọ” ma ọ bụ kwuo… .ma kedụ ihe ndị ọzọ ị na-eji ekpe ndị na-agụ akwụkwọ mkpa?
Na njedebe, 1000, 2000, 10,000 wdg kedu ka ị si mara ma “SHAZAM” gị ọ na-enwu dị ka nke Seth Godin? Ọtụtụ mmadụ maara Paris Hilton karịa Angelica Huston, mana amaara m nke m chọrọ ịhụ na fim.
Ọ na-echetara m m igwe ochie ndị ahụ ị na-ahụbu n'ụlọ mmanya "Jidere ebe a iji hụ ụdị onye ị hụrụ n'anya?" ruo iji igwe.
Ọ bụ ajụjụ onye ọ bụla chọrọ ịmata azịza ya, na nke enweghị igwe ọ bụla tozuru oke ikpe ya, yabụ na ịchọrọ maka nzaghachi maka ịnyagharị na m na-anwa ịghara ịga ebe ahụ na mbọ m na ịde blọgụ.